चिया कस्तो पिउनु राम्रो ? Nepalpatra चिया कस्तो पिउनु राम्रो ?
चियाको स्वाद नलिने शायद को होला ? आजकाल कालो चिया खानेको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । यसको ठोस कारणहो सेतो चियाको प्रयोग बढी गर्नाले पत्थरी बन्ने कुराको जानकारी नहुनु । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सेतो चिया भन्दा रातो चियाले धेरै फाइदा भएको छ ।
कालो चियाको प्रयोगले छिटो भोक लाग्ने समस्यबाट मुक्ति दिलाउनुका साथै शरीरमा शक्तिसमेत पैदा गर्छ । जसले मानिसलाई लामो समय क्रियाशील रहनका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ । कतिपय अवस्थामा दिनहुँ पिउने चिया हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ ।
अनुसन्धानमा तातो चिया पिउदा पिउने व्यक्तिको खाना नलिमा क्षति पुग्ने बताइएको छ । यो अनुसन्धान ति देशहरुमा गरिएको थियो जँहाका मानिसहरु तातो चिया बढी पिउने गर्दछन् । अनुसन्धानका अनुसार ६५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी गरम पदार्थ पिउदा खाना नलीमा असर गर्दछ, जसको कारण खाना नलीमा क्यान्सर हुन् सक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
तातो चिया नपिउदासम्म मजा नआउने चिया पारखीको सोच छ । चाहे जेहोस तातो प्येय पदार्थ होस या खाना खादा स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने बानी बसालौ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । कुनैपनि तातो चिजले छाला डडाउन सक्छ । हामीले तातो तातो पदार्थको सेवन गर्दा पहिले जिब्रोलाई हेर्छौं तर भोजन नलिलाई हेर्दैनौ यो कमजोरीलाई हामीले हटाउनुपर्छ ।
नोट : चिया पिउदा होस् या जुनसुकै बस्तु सेवन गर्दा तातो सेवन नगर्नुस् यसले क्यान्सर हुन सक्छ ।
#What kind of tea is best to drink?